ababhali Isincoko sele kwimfuno yonke le mihla. Yiba kwi ishishini yentengiso okanye ukuthengisa idijithali okanye ngenxa yezemfundo, ukusebenzisa kwabo ik___pusi zange zibe phantsi. Ngaloo baqesha ababhali umgangatho ipremiyamu umele ukuba impumelelo kuyo nayiphi na iprojekthi. Umntu akufuneki ukuba ukubila phandle uzifune, enyanisweni yabo…
Bebhala izincoko phantse lonke iza ebekiweyo. Oku kuthetha ukuba kufuneka ukuba ubhale phantsi koxinzelelo, kwaye oku mnandi kwaphela. ngoko ke, Checkout le phezulu 6 iingcebiso ukubhala indlela isincoko engcono. Ezi ziya kukunceda ubhale angqalileyo, kwindawo kunye nezincoko umdla uya kukuzisela wena babene olungileyo. 1.…
FORMAT ESISISEKO UKWAKHIWA KWE-FAL
FORMAT ESISISEKO UKWAKHIWA lesincoko Wonke umntu ofuna ukuba umbhali isincoko esisemgangathweni, kuba yinxalenye engundoqo ikhosi zonke ezifana ukusuka lokuqala ukuya kwinqanaba eyunivesithi. Kufuneka babhale izincoko, ezikolweni, iikholeji neeyunivesithi kakhulu, kuba yinxalenye ebalulekileyo ye standard zonke, subject o0f…
Nabanina uyaqonda ukuba ungene isikolo ibe imvelaphi eyoyikisayo. Phakathi enze ingqiqo ngoko isikolo ukuya, njani ukuba mawuhlawule, noko ukuba ezinkulu, ithuba lwentlalo ingcamango wakho ukuba abhale yinkcazo isiqinisekiso inokuba uvavanyo lokwenene. Ukusebenzisa iphepha siko olawulo kokuqamba inokuba isigqibo unqwenela ukuba…